Kodzero-dzevanhu, 12 Ndira 2019
Mugovera 12 Ndira 2019
Ndira 12, 2019
Makakatanwa aVaTrump neDemocratic Party Ovhiringawo Mashandiro eMizinda yeNyika Iyi
Muzinda mutsva weAmerica waifanira kuvhurwa zviri pamutemo nemusi weChina chapfuura, asi izvi hazvina kuitika nekuda kwemakakatanwa ari kunyika iyi pakati pemutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, nebato reDemocratic Party.
Nhengo yeMDC Inomirira Chiwundura Inomiswa Mudare Ichipomerwa Mhosva yeKurova Munhu
Mumiriri weChiwundura mudare reparamende, VaLivingstone Chimina, vanove zvekare sachigaro wevechidiki mubato reMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa mudunhu reMidlands South, vamiswa pamberi pedare muGweru nhasi vachipomerwa mhosva yekurova mumwe munhu.
Olivine Industries Yomira Kugadzira Mafuta, Sipo neZvimwe Zvigadzirwa
Bhodhi rekambani ye Olivine Industries, neChishanu rakazivisa kuti kambani iyi yamira basa rekugadzira zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, sipo pamwe nemajharini sezvo iri kutadza kuwana mari yekunze.
Ndira 11, 2019
Magaraji Otengesa Peturu neDhora rekuAmerica
Vazhinji vanotengesa mafuta edzimotokari vave kutengesa mafuta aya nemadhora ekuAmerica sezvo dambudziko iri riri kuramba richikura, uye magaraji anotengesa mafuta aya nemabhondi ave kuita mazuva asina kuwana mafuta izvo zvave kuita kuti vanhu vapedzewo mazuva vari mumitsetse.
Britain Yobatsira Vanodzidza kuMaruwa neMabhasikoro
Mukuru weDFID muZimbabwe neSouth Africa, Amai Annabel Gerry, vati chirongwa chemabhasikoro ichi chabatsira vana vechikoro vakawanda.
FC Platinum Yokweshana neOrlando Pirates neMugovera muBarbourfields
Vateveri venhabvu muZimbabwe vari kutarisira mufaro mukuru apo chikwata chiri kumiririra nyika muCaf Champions League FC Platinum iri kutamba ne Orlando Pirates yekuSouth Africa muBabourfields Stadium neMugovera.
Mukuru weDare raMajastiriti Omiswa Basa neNyaya yaVaKasukuwere naVaMandiwanzira
Mukuru wedare ramajistiriti kana kuti Chief Magistrate VaMishrod Guvamombe vambomiswa basa nhasi vachiferefetwa nemhosva yekuti vakapa mukana wekudzidzira basa rehugweta kuna VaSavior Kasukuwere naVaSupa Mandiwanzira avo vari kupomerwa mhosva dzehuori pavaive makurukota ehurumende.
Bazi rezveHutano Roparura Piritsi Idzva reKuderedza Hukasha hweHIV
Zimbabwe Yotarisana neEgypt muAfcon neMusi weChishanu
Mapurisa Ozara muMadhorobha neKutyira Kuti Vanhu Vanozoratidzira
Inflation yePagore Yoda Kusvika paZvikamu Zana muMwedzi waChivabvu